Ukufundiswa kwakhona ngokutya, Funda ukuba kuyintoni kwaye ungaqala njani Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Elinye lamanyathelo okuqala kwabo bafuna ukunciphisa umzimba ngendlela esempilweni neqinisekileyo kukwenza ukufundiswa okunesondlo ukuphucula ulwalamano lwabo nokutya ukuze ke bakwazi ukutya yonke into, kodwa ngokomlinganiso olungileyo.
Ngokuchasene noko abantu abaninzi bacinga, ukufundiswa kwakhona ngokutya asikokutya. Oku ikakhulu kukutshintsha kwemikhwa yokutya okunempilo, okukhokelela ekwehliseni ubunzima bomzimba (ukuba le yinjongo) kunye nokuphuculwa kwempilo kwimiba eyahlukeneyo, kokubini ngokwasemzimbeni nasengqondweni.
1 Kutheni ubheja kwimfundo yokutya kwakhona?
2 Kutheni le nto iimeko zokutyeba kakhulu zisonyuka kubemi?
3 Isebenza njani imfundo yokufunda kwakhona kwaye iboniswa ngubani
4 Izibonelelo zokufunda kwakhona ngokutya
4.2 · Ukulawula ubunzima
4.3 Uncedo kunyango lweengxaki zokutya
5 Iingcebiso ezilula ezinokwenza umahluko
5.1 Sela amanye amanzi
5.2 Yenza endaweni efanelekileyo
5.3 Kuphephe ukungatyi
5.4 Vavanya indlala kunye nokuzimisela ukutya
5.5 · Lala kamnandi
Kutheni ubheja kwimfundo yokutya kwakhona?
Impilo enkulu yanamhlanje yokutyeba kakhulu. Umbutho wezeMpilo weHlabathi udwelisa ingxaki njengeyona ngxaki yezempilo yoluntu kwihlabathi. Ukufumana umbono, kuqikelelwa ukuba ngo-2025 babekhona malunga ne-2.300 yezigidigidi abantu abatyebe ngaphezulu, ukongeza ngaphezulu kwe-700 yezigidi zabantu abatyebileyo.
Ungasathethi ke ngenani labantwana abatyebe ngokugqithisileyo nabatyebe kakhulu, elikhulayo kuphela kule minyaka idlulileyo. Namhlanje, eMzantsi Melika, ngaphezulu kwe-50% yabemi bajongene nengxaki yokutyeba kakhulu.
Kutheni le nto iimeko zokutyeba kakhulu zisonyuka kubemi?
Isizathu? Sihleli ngaphezulu kunakuqala, enkosi kwimisebenzi yesiqhelo, izifundo, intshukumo encinci kunye nokungakhathali kwinto esiyityayo. Ngokukhawuleza, kuyinto eqhelekileyo ukukhetha i-snack ekhawulezayo enexabiso elincinci lesondlo. Iimveliso ezinemizi-mveliso sele zixhaphake ngakumbi kunokutya okulungiselelwe kwalapha ekhaya.
Olu lwazi lunokubonakala lusoyikisa kwaye le yinjongo, kuba kukho imfuneko yokufundiswa kwakhona ngokutya. Kwaye kubalulekile kungekuphela kwabo bafuna ukunciphisa umzimba.
Ukufundiswa kwakhona kubonisiwe kuye nawuphina umntu, nokuba ufuna ukunciphisa umzimba, uzuze imisipha okanye nayiphi na enye injongo, kuba ufunda ukutya ngamaxesha afanelekileyo, into oyityayo kunye nobungakanani bomntu ngamnye.
Isebenza njani imfundo yokufunda kwakhona kwaye iboniswa ngubani
Ukuba ucinga ukuba kufuneka uphonononge imikhwa yakho, kuya kufuneka unxibelelane nesazi sezondlo ukuvavanya ubomi bakho kunye nendlela otya ngayo. Ingcali iya kukubuza iimvavanyo ezisisiseko ukubona ukuba injani impilo yakho kwaye iya kukubuza uthotho lwemibuzo ukufumanisa ukuba ubudlelwane bakho nokutya busebenza njani.
Ngolu lwazi, inkqubo yokwenziwa kwabafundi ngokutya inokuphuhliswa ukuze ukutya okunempilo kube ngumkhwa hayi uxanduva. Abantu abaninzi bahlala ngaphandle kokutya kangangeeyure okanye bayeke ukutya ukutya okuthile kuba becinga ukuba kuya konakalisa ukutya kwabo Ukufunda kwakhona ngokutya kunceda ukulinganisa obu budlelwane kunye nokutya, uninzi lwabantu alwazi ukutya ngendlela efanelekileyo, kwaye ilumkisa ngemfuno yokuphinda kufundiswe abantwana, abathi ukususela ebuntwaneni banxibelelana nonikezelo lokutya okuhambisanayo okuyingozi impilo.
Izibonelelo zokufunda kwakhona ngokutya
Kulabo bajolise kule njongo, ukutya kwakhona kokutya (ngokukhethekileyo, kuhlala kudityaniswa nezinye iindlela ezinempilo ezinje ngokuzivocavoca umzimba kunye nokulala ubusuku obulungileyo) kuya kuba yeyona nto iphambili. Kodwa yiba nomonde, kuba iziphumo azize ngobusuku kwaye konke kuya kuxhomekeka kwizinto zemfuza kunye neminye imikhwa ebomini bakho.
· Ukulawula ubunzima
Ngokufunda ukutya ngokuchanekileyo kwaye ngokweemfuno zakho zesondlo kunye neenjongo, kulula ukugcina ubunzima bakho obufanelekileyo ngaphandle kokukhathazeka malunga nezandla kwisikali kunye nefuthe eliqhelekileyo lokutya "okungummangaliso".
Uncedo kunyango lweengxaki zokutya
Ukunyanzelwa, bulimia, anorexia, ukuziva unetyala ngokutya into kuba ucinga ukuba uza kutyeba. Oku kukuphazamiseka kunye neemvakalelo ezinokulawulwa ngokufundiswa kwakhona kokutya (kwezinye iimeko, okunxulunyaniswa nenkxaso yengqondo ukuze iphumelele). Isizathu kukuba ufunda ukubeka phambili impilo kwinto oyibeka kwipleyiti yakho.
Iingcebiso ezilula ezinokwenza umahluko
Ngelixa uncedo lobuchwephesha kufuneka lube yimpumelelo kunye nengeniso, iindlela ezimbalwa ezilula zokucinga zinokuba sisiqalo kuhambo lwakho lokutshintsha umkhwa. Nazi ezinye:
Sela amanye amanzi
Kwixesha eliqhelekileyo, kuyinto eqhelekileyo ukulibala malunga ne-hydration. Xa usela amanzi amaninzi, uziva wanelisekile kwaye umzimba uyawaxabisa: izintso, inkqubo yokujikeleza kwegazi kunye nolusu, umzekelo, zezona zichaphazeleka kakhulu xa usela amanzi amancinci. Inqaku elinye kukuseta iwotshi ye-alamu kwifowuni yakho njengesikhumbuzo sokuhambisa amanzi.
Yenza endaweni efanelekileyo
Ngaba ulikhoboka lesoda? Ngokuthe ngcembe ukunciphisa isixa sesiselo esineswekile, ngokulinganayo kuyingozi ekudleni kunye neenguqulelo ezilula ngenxa yesigcinakaliso, isodiyam nezinye izinto zeekhemikhali. Ukuba usela kwisidlo ngasinye, zilinganisele kwesinye. Nanini na xa ufumana ithuba, zama ukuyitshintshela iijusi zendalo, ezizezinye ezinempilo nezinencasa. Kukwasebenza kwaloo nto kwiilekese ezisemva kwexesha lomsebenzi: kuthekani ngokutya isiqhamo okanye ibha yeprotini?
Ukuhamba ngaphandle kokutya ixesha elide kunokuba yingozi kwimetabolism yakho, ecothisa "ukugcina" iivenkile zamandla. Ngokubanzi, kuyacetyiswa ukuba kutyiwe rhoqo kwiiyure ezintathu, ukutyiwa phakathi kwesona sidlo sikhulu. Iziqhamo, iivithamini kunye nejusi yimizekelo yokutya okuphakathi.
Vavanya indlala kunye nokuzimisela ukutya
Ukuba kuvela umnqweno ongafanelekanga wokutya uhlobo oluthile lokutya, njengetshokholethi okanye idizethi eyongezelelweyo emini, kubalulekile ukuzama ukuqonda: ingaba le yindlala okanye ngumnqweno wokutya? Oku kunceda ukuthintela ukwenza izigqibo ezingxamisekileyo kunye nokubuyela kukhetho olusempilweni lokutya.
· Lala kamnandi
Ukulala izitenxo kunefuthe elibi kwinkqubo yemetabolism kwaye kunciphisa kakhulu ukuzimisela kwemihla ngemihla ukuzilolonga. Izifundo zesayensi zibonise ukuba ukungalali kakuhle kuguqula iihormone ezikhokelela ekubeni abantu batye kakhulu. Izikhokelo zikazwelonke nezamazwe aphesheya zibonisa ubuncinci iiyure ezisibhozo zokulala ngosuku.